ဥရောပ၌ Tipping ရန် Ultimate လမ်းညွှန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပ၌ Tipping ရန် Ultimate လမ်းညွှန်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 01/04/2021)
ကမ္ဘာတစ်လွှား, Tipping အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်, ဥပမာ: တောင်အာဖရိကမှာ Tipping လုပ်ဖို့လိုတယ်, ဒါကြောင့်၌ရှိသကဲ့သို့ ယူအက်စ်အေ. သငျသညျအကြားတစ် ဦး အစွန်အဖျားထားခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ရသည် 15 နှင့် 25% အမေရိကမှာ, နှင့်သင်မကျင့်လျှင်သင်အလွန်ကောင်းစွာဒေါသထွက်နေတဲ့စားပွဲထိုးများကလိုက်။ နိုင်ပါသည်. ဒါပေမယ့်ဥရောပကော? ဥရောပရှိဥပဒေကြမ်းများစွာသည်အကြံဥာဏ်များအားလုံးပါ ၀ င်လိမ့်မည်, သို့သော်, ဒီကတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကွဲပြားခြားနားသည်. သင်၏ ဦး တည်ရာတိုင်းပြည်တွင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့်အလေ့အကျင့်များကိုသိရှိခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သောဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်ဥရောပမှာအမြစ်တွယ်ဖို့အန္တိမလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ!
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဥရောပ၌ Tipping To Ultimate Guide
သင်သည်ဥရောပတွင်ရောက်နေခြင်းသည်သင်ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်. ဥပမာ, စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ကိုကြယ်ငါးပွင့်ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏နောက်ကွယ်ရှိဆာဗာတစ်ခုဆီသို့မတူညီသောအခြေခံဖြင့်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်လိမ့်မည်. အချို့ကိစ္စများတွင်အဖျော်ယမကာစပ်သည်အစွန်အဖျားလုံးဝမမျှော်လင့်နိုင်ပါ, ဘယ်မှာတက္ကစီယာဉ်မောင်းလိမ့်မယ်. သင်၏သမ္မာသတိကိုအသုံးပြုခြင်း, နှင့်ရက်ရောမှုအမြဲမှန်ကန်သောအစွန်အဖျားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသွားကြဖို့ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. လည်း, နေရာအများစုတွင်သင်ငွေသားထည့်ရန်လိုအပ်သည်, ဒါကြောင့်သင့်ကိုယူရိုငွေစက္ကူအနည်းငယ်ယူထားသင့်တယ်.
အတွက် Tipping စာဆိုင်များ
အစားအစာနှင့်အချိုရည်များကိုစားပွဲသို့ယူဆောင်လာသည့်မည်သည့်အခြေအနေမဆိုအစွန်အဖျားလိုအပ်သည်. ပမာဏသည်သင်နှစ်သက်သောထမင်းချက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်. ဥရောပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အကယ်၍ သောက်စရာတစ်စုံသော်လည်းအစားအစာမဝယ်ပါကယူရိုငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုငွေပမာဏ၏ထိပ်တွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။. တစ်ထိုင်တည်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြည့်အဝအစားအစာများကိုကွဲပြားခြားနားသည်. ဒီကိစ္စမှာ,afew euros per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. အကယ်၍ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အမှန်တကယ်မွေ့လျော်ပါကအပိုမှတ်ချက်မလိုအပ်သောကြောင့်ယင်းကိုစစ်ဆေးပါ. တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုသည်အပိုဆောင်းလိုအပ်သည်, ဤအမှုကိစ္စများတွင်ဒါ, သင်တက်အထိလမ်းလျှောက်လိမ့်မည် 15%.
တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်ရှိအရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်အများစုသည်အကြံဥာဏ်များလုံးဝမရရှိပါ. အဖျော်ယမကာလောင်းတစ်လစာရသည်, နှင့်အစွန်အဖျားအိုးထဲမှာအနည်းငယ်ဒင်္ဂါးပြားအများဆုံးဖွယ်ရှိတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်နေစဉ်, မလိုအပ်ပါဘူး. သငျသညျအစွန်အဖျားပြုလျှင်, နောက်တဖန်ငွေကိုသာသုံးစွဲဖို့သတိရပါ, မှတ်စုများ၊. သငျသညျအချည်းနှီးသောအဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်5ဥရောပမှာတော့တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘား.
Stylists ပြီးတော့ Spa ရဲ့
လူတော်တော်များများဆံပင်အသစ်ကိုရချင်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်အနားယူတဲ့အနှိပ် အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်မှာ. ကံကောင်းထောက်မစွာသင်သည်ဥရောပတစ်ခွင်ရှိ spas နှင့် stylist များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်, မကြာခဏမြို့တိုင်းနီးပါး၌တည်၏. Tipping, တစ်ခုခုကိုအမှု၌, များသောအားဖြင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်. သင်ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်ပါက, သငျသညျအဖြစ်မြင့်မားသွားလိမ့်မည် 15%.
ဥရောပတွင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများအတွက်ဟိုတယ်များသည်မကြာခဏမေးမြန်းခြင်းများဖြစ်သည်. လက်မ၏စည်းကမ်းအတိုင်း, တစ်ခုမှာ One Euro လမ်းညွှန်ကိုအမြဲလိုက်နာသင့်သည်. အခြေခံအားဖြင့်သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်အကြံဥာဏ်များတွင်ယူရိုတစ်လုံးထားရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်. bellhop သို့မဟုတ်ပေါ်တာသည်သင်၏အိတ်များသယ်ဆောင်ပါ, ထို့နောက်အိတ်နှုန်းတစ်ယူရိုလုံလောက်သည်. အိမ်သန့်ရှင်းရေးကိုတစ်ရက်လျှင်ယူရိုငွေရသင့်သည်. သင့်ရဲ့ concierge တင်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်၎င်းသည်သင်ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ပေါ်မူတည်သင့်သည်. အကယ်၍ သူတို့သည်အထက်နှင့်ကျော်လွန်သွားပါကသင်၏နေထိုင်ခြင်းသည်အမှတ်ရစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်, ထို့နောက် ၅-၁၀ ယူရိုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောငွေပမာဏသည်သင့်လျော်သည်.
အငှားယာဉ်များကိုဘယ်လိုရှာမလဲ And Transport
တက္ကစီနှင့်ဥဗာတို့သည်ဥရောပတစ်ခွင်သို့ပျံ့နှံ့သွားခြင်း၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. အဘယျသို့ tip ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါ, ကားမောင်းသူအားမည်ကဲ့သို့ပေးသည်ကိုသတိရသင့်သည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, သော်လည်း, တိုတောင်းသောတက္ကစီသို့မဟုတ် Uber စီးရန်အတွက်ယူရို ၂ ဒေါ်လာပေးသင့်သည်. Uber ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများကယာဉ်မောင်းကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်သိစေနိုင်သည်, မီတာတက္ကစီငွေသားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်. ခရီးသွားနေစဉ်ဥရောပ၌ခရီးသွားခြင်းသည်အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်. အမြဲတမ်းမလိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ, but often appreciated. သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း သင့်ရဲ့အဘို့ ဥရောပခရီးစဉ် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်လက်မှတ်များဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်.
နိုင်ငံအားဖြင့်ဥရောပသို့ Tipping မှ Ultimate လမ်းညွှန်
ဥရောပနိုင်ငံအများစုသည်နိုင်ငံအများစုသည်တူညီသောအထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာကြသည်. ဒါပေါ့, တစ်ခုအမြဲတမ်းသင့်ပါတယ် ရည်ရွယ်ထားသော ဦး တည်ရာကိုသုတေသနပြုပါ သင်အပြည့်အဝနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ခရီးသွားလာမီ. မီးရထားခရီးသွားလာ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နိုင်ငံများစွာသို့သင်မကြာခဏသွားနိုင်သည်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းအတိအကျသေချာဖြစ်ခြင်းအမြဲအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်. အချို့နိုင်ငံများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မတူကြပါ, သို့သော်.
၎င်းသည်သူတို့၏ဗိုက်ကင်းဇစ်မြစ်၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုလား၊, ဒီနိုင်ငံတွေကသင့်ကိုမစော်ကားတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်. စားသောက်ဆိုင်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအများစုတွင်ငွေတောင်းခံလွှာတွင်ပါ ၀ င်သောအစွန်အဖျားရှိသည်. ငွေသားသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကတဆင့်ဖြစ်စေငွေပမာဏအစားအနီးဆုံးယူရိုသို့ငွေလွှဲနိုင်သည်.
ဂရိရဲ့နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားအရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ, နှင့် Tipping မျှခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး. ပိုကြီးသည့်ငွေတောင်းခံလွှာများသည်သေးငယ်သောအကြံပေးချက်များနှင့်သေးငယ်သည့်ငွေတောင်းခံလွှာများကပိုမိုကြီးမားသောအကြံဥာဏ်များလိုအပ်သည်.
အနည်းဆုံးချန်ထားပါ 5% အဖျား, ဆာဗာများအတွက်ငွေသား, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, နှင့်သြစတြီးယားကွဲပြားခြားနားသည်.
အဘယ်အရာကိုအိုင်ယာလန်နှင့်စကော့တလန်ခုနှစ်တွင် Tip ရန်
သူတို့ရဲ့ဖော်ရွေလူသိများသည်, ဤလူမျိုးနှစ်မျိုးလုံးသည်သင်၏အိတ်များကိုပျော်ရွှင်စွာသယ်ဆောင်လာလိမ့်မည်. ခရီးဆောင်အိတ်များပို့ရန်မလိုအပ်ပါ, များသောအားဖြင့်မျှော်လင့်မထားပါ. ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းသည်, သို့သော်, မျှော်လင့်ထားသည့်. သင်သည်သင်၏အထမ်းသမားထံမှအနာဂတ်၌တူညီသောဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, အပြုသဘောဆောင်သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သေချာစေပါ.
အဘယ်အရာကိုဥရောပမှာ Tip ရန် – ဗြိတိန်နိုင်ငံ
များစွာသောဗြိတိသျှလူမျိုးများသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားအိမ်မှုကိစ္စထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်မလိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်. ဒါကြောင့်ဥရောပတိုက်တွင် Tipping မှကြွလာသောအခါ, ဒီဟာအခိုင်မာဆုံးစည်းမျဉ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ. သင့်ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းအပေါ်အစွန်အဖျားမထားပါနဲ့, ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကအများဆုံးဖွယ်ရှိရှေ့စားပွဲခုံမှာပေးအပ်ပါလိမ့်မည် ပိုက်ဆံ. အဖျော်ယမကာစပ်ကိုလည်းအကြံပေးချက်များမျှော်လင့်ထားပါဘူး, သူတို့ကို Tipping အပေါ်သို့မျက်မှောင်ကြုတ်နိုင်ပါတယ်. အားလုံးဆိုလိုသည်, ဖော်ရွေဖြစ်နှင့်သင်၏ဖျော်ယမကာစပ်ဝန်ခံ. ဒင်္ဂါးအနည်းငယ်ကို tip အိုးတလုံးထဲထည့်ပါ. အကယ်. မရ, အစားညီမျှခြင်းထဲကအစွန်အဖျားထားခဲ့ပါ.
ဥရောပ၌ Tipping နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံး rounding
ဥရောပတွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာသင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်. တိုင်းပြည်အကြောင်းအားလုံးဖတ်ပါ, သို့မဟုတ်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စီစဉ်ထားသောနိုင်ငံများ. သတိရပါ ရထားခရီးစဉ်များသည်နိုင်ငံများစွာသို့သင်မကြာခဏသွားလေ့ရှိသည် သင်မှာရပ်နိုင်မည်အကြောင်း. အမြဲတမ်းငွေသားယူလာ, ဒင်္ဂါးနှစ်ပြားစလုံး, နှင့်ငွေသားကို tip ဖို့မှတ်စုအနည်းငယ်. သင်မူဝါဒများမသေချာလျှင်, စားသောက်ဆိုင်အတွက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသောစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာပါ, and the one Euro rule for everything else.
သတိရ, ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းသင်ကြားပေးလိုပါသည်, အချိန်တန်ရင်မင်းခရီးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ရထားခရီးသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုဖြစ်ကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ခရီးကိုပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပ၌ Tipping ရန် Ultimate လမ်းညွှန်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ထို့အပြင် de ကို fr သို့မဟုတ် tr သို့သင်ရွေးချယ်သောအခြားဘာသာစကားများပြောင်းနိုင်သည်.
#စားသောက်ဆိုင် europetravel အစာ TippingEurope ရထားခရီးသွား traveltips Vacations
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား